के हो बच्चामा हुने लिम्फोमा ? बच्चामा लिम्फोमा भएको कसरी थाँहा पाउँने ? – Ishan Hospital
01-4954537 , 4-981962 ,4-380584 , 9849526159 , 4-959560 (24/7 emergency service)
लिम्फोमाका बारेमा अझै पनि धेरै मानिस अनविज्ञ रहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय बच्चाहरुमा लिम्फोमा रोग बढी देखिन थालेको छ । लिम्फोमा गम्भीर प्रकृतिको रोग भएकाले पनि यसको बारेमा जानकार हुनु आवश्यक छ । के हो लिम्फोमा ? बच्चामा यो कसरी लाग्छ ? लक्षण के कस्ता देखापर्छन् ? र बच्न के कस्तो सावधानी अपनाउने ? अंकुरण खबरका लागि बाल रोग,बाल क्यान्सर तथा रक्त रोग विशेषज्ञ डा.प्रकाशनीधि तिवारीसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित अंश…
लिम्फोमा भनेको के हो ?
लिम्फोमा भनेको एक प्रकारको क्यन्सर हो । विशेष गरेर Epstein Barr Virusको संक्रमणबाट ग्रन्थीमा हुने एक प्रकारको क्यान्सरलाई नै लिम्फोमा भनिन्छ ।
बच्चाहरुमा पनि लिम्फोमा देखिने गरेको पाइन्छ । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका विशेषतः ४ वर्षदेखि १२ वर्षका बच्चाहरुमा लिम्फोमा बढी देखिने गरेको पाइन्छ ।
सामान्यतया हजकिन र नन्हजकिन गरि लिम्फोमा २ प्रकारको हुन्छ
लिम्फोमा हुने कारण :
लिम्फोमा यही कारणले हुन्छ भन्ने भन्दा पनि जसमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम छ, उसमा यसको संक्रमण हुने संभावना बढी हुन्छ । त्यस पछि वंशाणुगत गुण, एचआइभी एडसको संक्रमण ,गर्भावस्थामा विभिन्न पोषण तत्वको कमी लगाएतका कारणले हुनसक्छ । यसको अलाबा कहिले काँहि कुनै कारण नै थाँहा नहुदै पनि यो देखा पर्न सक्छ ।
लिम्फोमाका लक्षणहरु :
पटक पटक ज्वरो आउने ।
ज्वरो आए पछि औषधि सेवन गर्दा पनि छिट्टै निको नहुने ।
एक्कासी तौल घट्ने ।
खलखली पसिना आउने ।
शरीरका विभिन्न भागमा गिर्खाहरु आउने ।
खाना अरुची हुने ।
नशाहरु सुन्निने ।
ठुलो मानिसको तुलानामा बच्चामा क्यान्सर लाग्यो भने धेरै छोटो निको हुन्छ । समयमै या पहिलो चरणमै यसको सही उपचार भयो भने यो छोटो समय मै पूर्ण ठीक हुनसक्छ । चकित्सको सल्लाहा बमोजिम भनेको मान्यो साबधानी अप्नायो भने बच्चाले सहज जीवनयापन जीउन सक्छ ।
यसको बेलैमा उपचार गरिएन भने अन्य अंगमा के कस्तो असर गर्छ ?
यसको संक्रमण बढ्दै गयो भने कलेजो,फियो सुन्निने,कहिलेकाही बोन म्यारोमा फैलने,मस्तिष्क या ढाडमा समेत फैलन सक्छ र मृत्युसमेत हुने गर्दछ ।
यसको उपचार विधि के कस्तो हुन्छ ?
लिम्फोमा कुन अवस्थामा पुगेको छ सोही अनुसार यसको उपचार विधि निर्धारण हुन्छ ।पहिलो, दोस्रो चरणमा छ भने करिब तीन हप्ता औषधि चलायो भने पूर्ण ठीक हुन्छ । भने तेस्रो चरणमा छ भने कुनैमा ५ हप्तासम्म पनि चलाउनु पर्ने हुन सक्छ ।चौथो पाचौं चरणमा पुगेको छ भने कडा उपचार गर्नु पर्ने हुन सक्छ यो अवस्थामा पुगेका बिरामी ५० प्रतिशत मात्र बाच्ने संभावना रहन्छ तर जति पछि उपचार गर्यो उती ढीला, अप्ठ्यारो,महंगो पर्न सक्छ र दोहोरीने संभावना पनि बढी रहन्छ ।
यसबाट बच्न के गनुृपर्छ ?
यही कुरामा सावधानी अप्नायो भने यस्तो क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ भन्ने हैन तर यो बाट बच्न गर्भावस्थामा जथाभावी औषधिको सेवन नगर्ने ।
यदि आफ्ना अग्रज कसैलाई यस्तो समस्या छ भने या माथिका कुनै पनि लक्षण देखियो भने तुरुन्त विशेषज्ञकोमा स्वास्थ परीक्षण गर्नुपर्छ । यसको उपचार महंगो भएकाले पनि पहिलो सुरुवाती चरण वा पहिलो दोस्रो चरणमा हुँदै उपचार गरायो भने पूर्ण निको हुन्छ ।
चिसो बढेसँगै बालबालिका बिरामी हुने क्रम पनि बढ्छ । जाडो मौसममा बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा इशान बाल तथा महिला अस्पतालमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा.
३० वर्षदेखि नर्सिङ पेशामा रहेकी दिलकुमारी गुरुङ हाल काठमाडौंको ईशान बाल तथा महिला अस्पतालमा मेट्रोन छिन्। उनै नर्स दिलकुमारीका कुरा यो पटकको नर्सका कुरामा– मैले नर्सिङ पेशा शुरु